သားအိမ်ကင်ဆာ - Page 13 of 21 - Hello Sayarwon
Dr. Ye Mhan Linn မှ ရေးသားသည်။6ရက် အကြာက တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
သားအိမ်အတွင်းပိုင်းနံရံမှာ အခြေပြုပြီး ဖြစ်ပွားတဲ့ကင်ဆာကို သားအိမ်ကင်ဆာလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ၎င်းဟာ သားအိမ်အတွင်းပိုင်းရဲ့ အနားသတ်ဆဲလ်တွေမှာ စတင်ဖြစ်ပွားတဲ့ ကင်ဆာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
သားအိမ်ကင်ဆာရှိသူ အမျိုးသမီးတွေဟာ ပုံမမှန်ဘဲသွေးဆင်းတဲ့ လက္ခဏာကြောင့် ထိတ်လန့်ပြီး ဆရာဝန်ဆီ သွားရောက်ပြသ စစ်ဆေးမှုခံယူရာကနေ ကင်ဆာဖြစ်ကြောင်း စောစောသိရှိသွားတာ များပါတယ်။
သားအိမ်ကင်ဆာကြောင့် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့
မိန်းမကိုယ်မှ ပုံမှန်မဟုတ်သည့် အရည်များဆင်းခြင်း
ဘယ်သူမဆို အဆိုပါလက္ခဏာတစ်ခုခု ဖြစ်လာခဲ့ရင် ဆရာဝန်ဆီ အမြန်ဆုံး သွားရောက်ပြသသင့်ပါတယ်။
ဘယ်အရာတွေက သားအိမ်ကင်ဆာ ဖြစ်စေသလဲ။
သားအိမ်ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းကိုတော့ အခုထိ မသိရသေးပါဘူး။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ သားအိမ်အတွင်းပိုင်းနံရံက ဆဲလ်တွေရဲ့ မျိုးဗီဇဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပဲ ရှင်းပြထားပါတယ်။ ပုံမှန်ကျန်းမာတဲ့ဆဲလ်တွေဟာ ဖြစ်ချိန်တန်ဖြစ်၊ သေချိန်တန်သေကြပေမယ့် မျိုးဗီဇဖောက်ပြန်တဲ့ဆဲလ်တွေကတော့ မမျှော်လင့်ထားတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ အသစ်ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်ပြီး သေဆုံးရမယ့်အချိန်မှာ မသေဆုံးတဲ့အတွက် တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပူးကပ်ပြီး ကင်ဆာအကျိတ်အသွင် ဖြစ်ပေါ်လာလေ့ရှိပါတယ်။ ၎င်းကင်ဆာဆဲလ်တွေဟာ ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ အခြားအစိတ်အပိုင်းတွေဆီကိုပါ ပျံ့နှံ့နိုင်ကြပါတယ်။
သားအိမ်ကင်ဆာရှိမရှိ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ စမ်းသပ်ရှာဖွေအတည်ပြုနိုင်မလဲ။
သားအိမ်ကင်ဆာရှိမရှိ အောက်ပါနည်းလမ်းတွေနဲ့ စစ်ဆေးအတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။
သင့်ဆရာဝန်အနေနဲ့ သင့်ရဲ့လိင်အင်္ဂါအပြင်ဘက်ကို ဦးဆုံး စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တဆင့်အနေနဲ့ မိန်းမကိုယ်ထဲ လက်ချောင်း ၂ချောင်းထည့်ပြီး ကျန်လက်တစ်ဖက်က ဝမ်းဗိုက်ပေါ်ဖိခြင်းအားဖြင့် ခန္ဓါကိုယ်တွင်းက သားအိမ်နဲ့ သားဥအိမ်တွေကို စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သားအိမ်ခေါင်းကို ကောင်းစွာမြင်ရဖို့ မိန်းမကိုယ်ထဲ ပစ္စည်းတစ်မျိုးထည့်ပြီး စမ်းသပ်စစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းကတော့ သင့်ရဲ့မိန်းမကိုယ်ထဲကို အသံလှိုင်းအာရုံခံ ကိရိယာတစ်မျိုးထည့်ပြီး သားအိမ်အတွင်းပိုင်းနံရံရဲ့ မျက်နှာပြင်အခြေအနေကို ပုံဖော်စစ်ဆေးတဲ့နည်းလမ်း ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်သားအိမ်အတွင်းပိုင်းနံရံကို မှန်ပြောင်းအသုံးပြုပြီး ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သားအိမ်ကင်ဆာဟုတ်မဟုတ် ရောဂါရှာဖွေအတည်ပြုနိုင်တဲ့ နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ သားအိမ်အတွင်းပိုင်းနံရံက တစ်ရှူးနမူနာ အနည်းငယ်ကိုယူပြီး ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ စစ်ဆေးခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသားစယူခြင်းကို မေ့ဆေးထုံဆေး အသုံးမပြုဘဲ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အသားစယူရုံနဲ့ ဓါတ်ခွဲခန်းမှာစစ်ဆေးဖို့ လုံလောက်တဲ့တစ်ရှူးပမာဏ မရရှိဘူးဆိုရင်တော့ ဒီနည်းလမ်းကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်က သင့်သားအိမ်အတွင်းပိုင်းနံရံက တစ်ရှူးတွေကို ခြစ်ယူပြီး ကင်ဆာဆဲလ်တွေရှိမရှိ စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
သားအိမ်ကင်ဆာကို ကုသနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေက ဘာတွေလဲ။
သားအိမ်ကင်ဆာကို ကုသနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကတော့
သားအိမ်တစ်ခုလုံးကို ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားခြင်း (သားအိမ်ထုတ်ခြင်း)
ဓါတ်ရောင်ခြည်အသုံးပြုပြီး ကင်ဆာဆဲလ်များကို သေစေခြင်း
ဟော်မုန်းကုထုံးဖြင့် ခန္ဓါကိုယ်ရှိ ဟော်မုန်းပမာဏထိန်းညှိခြင်း
နာကျင်မှုဝေဒနာနှင့် အခြားရောဂါလက္ခဏာများ သက်သာအောင် ကုသခြင်းအားဖြင့် လူနာကို တတ်နိုင်သမျှ သက်သောင့်သက်သာ အသက်ရှည်ရှည်နေနိုင်အောင် ပံ့ပိုးပေးခြင်း
Endometrial cancer. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/endometrial-cancer/home/ovc-20205704. Accessed January 19, 2016.